ထူးထူးဆန်းဆန်း ဇီးကွက်တစ်ကောင် လို ဦးခေါင်းကို ၁၈၀ ဒီဂရီ လှည့်နိုင်တဲ့ လူသားကောင်လေး – Shwe Naung
Shwe Thuta | December 22, 2020 | Knowledge | No Comments
အသက် ၁၄နှ စ်အရွယ် ရှိတဲ့ Sameer Khan ဟာ ဇီးကွက် တစ်ကောင် လိုမျိုး ခေါင်းကိုေ နာက်ပြန်လှ ည့်နိုင်တာကို The Sun သတင်းဌာ နမှာဖော်ပြထား တာတွေ့ရှိရ ပါတယ်။
Sameer Khan ကသူ့ရဲ့ ကျော့ရိုးကို အလွယ်တကူေ ကွးဆန့်နိုင်တဲ့ ပျော့ပြောင်း တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စ ည်းပုံကိုအသုံး ချပြီး ဟောလီးဝုဒ် သရဲကားတွေမှာ သရုပ်ဆောင်အြ ဖစ်ပါဝင်နိုင်ဖို့ စိတ် ကူးနေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေထဲ မှာဆိုရင်တော့ Sameer Khan ဟာ လုံးဝကို ၁၈၀ ဒီဂရီအတိ အကျဦးခေါင်း လှည့်နေနိုင် တာပါ။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ကရာချိမြို့သားဖြစ်တဲ့ Sameer Khan ဟာသရဲ ကားရုပ်ရှ င်တွေထဲမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလု ပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Sameer က “… ကျွန်တော်က ဟောလီးဝုဒ် သရဲကားထဲမှာ ဇာတ်ဆောင် ကခေါင်းကိုနော က်လှည့်ပြီး အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တာတွေ့တယ်…. ကျွန်တော်ေ တာ်တော်လေး သဘော ကျသွားတယ်….အဲဒီအချိ န်ကစပြီး လေ့ကျင့်ဖြစ်တာ…လနည်းန ည်းပဲကြာတယ်… အခုလိုလုပ်နိုင်လာတာပဲ….. အမေကတွေ့ေ တာ့ရိုက်တ ယ်လေ ….ထပ်မလုပ် ခိုင်းဘူး..ဇတ်ကျိုးမှာစိုး လို့ဆိုပြီးတော့….
ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာ လာတာတော့လဲ ကျွန်တော့်မှာ ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆော င်ရှိတယ်ဆိုတာ အမေလဲသိသွားတယ်….. ” လို့ဆိုပါတယ်။ Sameer ကကျောင်း ကထွက်ပြီးတော့ “Dangerous Boys” အ မည်ရတဲ့ အကအဖွဲ့ထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ Sameer ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူက
အထည်အလိ ပ်စက်ရုံမှာအ လုပ်လုပ်ပြီး တစ်နှစ်တည်းမှာနှစ်ကြိမ်တို င်တိုင်နှလုံးရပ်ခဲ့ တာကြောင့် အခုဆိုရင် Sameer ဟာအကနဲ့အသ က်မွေးဝမ်းေြ ကာင်းပြုပြီး မိသားစုကိုထော က်နေရပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသော သားဖြစ်တဲ့ Sameer ကဖျော်ဖြေပွဲေ တွသွားတဲ့အခါမှာ ပွဲတစ်ပွဲကို ၆ပေါင်ကနေ ၁၀ပေါင် အထိရပါတယ်။
တလဆိုရင် ပေါင်၁၀၀ ကနေ ၂၀၀ အထိဝင်ေ ငွရှာနိုင်သူပါ။ Sameer က သားလိမ္မာတစ်ဦးဖြ စ်တဲ့အပြင် ညီမ၄ယောက်ကိုလည်း ကျောင်းမထွက်ခိုင်းပဲ ရှာဖွေကျွေးေ မွးနေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါ တယ်။
Dangerous Boys ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းေ ဆာင်ဖြစ်သူကတော့ Sameer ဦးခေါင်းလှည့် နိုင်တာကိုပထမ ဆုံးမြင်ရတဲ့အခါ အံ့အားသင့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Sameer ဟာ အလွန်အမင်းပျော့ေြ ပာင်းလွန်းသူဖြစ်ပြီး သင့်တော်တဲ့ေ လ့ကျင့်မှုသာ ပေးနိုင်ခဲ့ရင် ထူးချွန်မည့်အကြောင်း အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အသက္ ၁၄ႏွ စ္အရြယ္ ရွိတဲ့ Sameer Khan ဟာ ဇီးကြက္ တစ္ေကာင္ လိုမ်ိဳး ေခါင္းကိုေ နာက္ျပန္လွ ည့္နိုင္တာကို The Sun သတင္းဌာ နမွာေဖာ္ျပထား တာေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။
Sameer Khan ကသူ႔ရဲ့ ေက်ာ့ရိုးကို အလြယ္တကူေ ကြးဆန႔္နိုင္တဲ့ ေပ်ာ့ေျပာင္း တဲ့ကိုယ္ခႏၶာဖြဲ႕စ ည္းပုံကိုအသုံး ခ်ၿပီး ေဟာလီးဝုဒ္ သရဲကားေတြမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္အျ ဖစ္ပါဝင္နိုင္ဖို႔ စိတ္ ကူးေနပါတယ္။
ဓာတ္ပုံေတြထဲ မွာဆိုရင္ေတာ့ Sameer Khan ဟာ လုံးဝကို ၁၈၀ ဒီဂရီအတိ အက်ဦးေခါင္း လွည့္ေနနိုင္ တာပါ။ ပါကစၥတန္နိုင္ငံ ကရာခ်ိၿမိဳ႕သားျဖစ္တဲ့ Sameer Khan ဟာသရဲ ကား႐ုပ္ရွ င္ေတြထဲမွာ ပါဝင္နိုင္ဖို႔ ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ခန္းေတြလု ပ္တယ္လို ႔ဆိုပါတယ္။
Sameer က “… ကၽြန္ေတာ္က ေဟာလီးဝုဒ္ သရဲကားထဲမွာ ဇာတ္ေဆာင္ ကေခါင္းကိုေနာ က္လွည့္ၿပီး အေနာက္ကိုလွည့္ၾကည့္တာေတြ႕တယ္…. ကၽြန္ေတာ္ေ တာ္ေတာ္ေလး သေဘာ က်သြားတယ္….အဲဒီအခ်ိ န္ကစၿပီး ေလ့က်င့္ျဖစ္တာ…လနည္းန ည္းပဲၾကာတယ္… အခုလိုလုပ္နိုင္လာတာပဲ….. အေမကေတြ႕ေ တာ့ရိုက္တ ယ္ေလ ….ထပ္မလုပ္ ခိုင္းဘူး..ဇတ္က်ိဳးမွာစိုး လို႔ဆိုၿပီးေတာ့….
ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ၾကာ လာတာေတာ့လဲ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘုရားေပးတဲ့ လက္ေဆာ င္ရွိတယ္ဆိုတာ အေမလဲသိသြားတယ္….. ” လို႔ဆိုပါတယ္။ Sameer ကေက်ာင္း ကထြက္ၿပီးေတာ့ “Dangerous Boys” အ မည္ရတဲ့ အကအဖြဲ႕ထဲမွာ ပါေနပါတယ္။ Sameer ရဲ့ဖခင္ျဖစ္သူက
အထည္အလိ ပ္စက္႐ုံမွာအ လုပ္လုပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တည္းမွာႏွစ္ႀကိမ္တို င္တိုင္ႏွလုံးရပ္ခဲ့ တာေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ Sameer ဟာအကနဲ႔အသ က္ေမြးဝမ္းေၾ ကာင္းျပဳၿပီး မိသားစုကိုေထာ က္ေနရပါတယ္။
တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္တဲ့ Sameer ကေဖ်ာ္ေျဖပြဲေ တြသြားတဲ့အခါမွာ ပြဲတစ္ပြဲကို ၆ေပါင္ကေန ၁၀ေပါင္ အထိရပါတယ္။
တလဆိုရင္ ေပါင္၁၀၀ ကေန ၂၀၀ အထိဝင္ေ ငြရွာနိုင္သူပါ။ Sameer က သားလိမၼာတစ္ဦးျဖ စ္တဲ့အျပင္ ညီမ၄ေယာက္ကိုလည္း ေက်ာင္းမထြက္ခိုင္းပဲ ရွာေဖြေကၽြးေ မြးေနသူျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါ တယ္။
Dangerous Boys ရဲ့အဖြဲ႕ေခါင္းေ ဆာင္ျဖစ္သူကေတာ့ Sameer ဦးေခါင္းလွည့္ နိုင္တာကိုပထမ ဆုံးျမင္ရတဲ့အခါ အံ့အားသင့္ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ Sameer ဟာ အလြန္အမင္းေပ်ာ့ေျ ပာင္းလြန္းသူျဖစ္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ေ လ့က်င့္မႈသာ ေပးနိုင္ခဲ့ရင္ ထူးခၽြန္မည့္အေၾကာင္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ဆိုခဲ့ပါတယ္။
Tags:ထူးထူးဆန္းဆန္း ဗဟုသုတ, ထူးထူးဆန်းဆန်း ဗဟုသုတ
ခြေမ ထက် ခြေညှိုး ရှည်တဲ့ သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့် တာလဲ ? . . .
လမ်းကို ဖြတ်ကူးပြီး အကို့ဆီကိုပြေးလာတဲ့ ညီမဖြစ်သူကို အသက်စွန့်ပီး ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေး(ရုပ်သံ)
အစိုးရရုံးပေါင်းစုံဝင်း ထဲမှာ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားမိတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် အဖြစ်